महाप्रबन्धकमाथि एसिड फ्याँकी आक्रमण - NewsPolar NewsPolar
महाप्रबन्धकमाथि एसिड फ्याँकी आक्रमण
१४ मंसिर २०७१, आईतवार १०:२६
इरान, १४ मंसिर । इरानका एक अस्पतालका महाप्रबन्धकमाथि शनिबार एसिड आक्रमण भएको छ । मोटरसाइकलमा आएका दुई आक्रमणकारीले इरान अस्पतालका महाप्रबन्धकडा. आनभारीको अनुहारमा एसिड फ्याँकी आक्रमण गरेका प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि भएका यस्ता एसिड आक्रमणमा विशेष गरी महिलालाई लक्ष्यगरी गर्ने गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । प्रहरीले आफ्नो बेवसाइटमा रााखिको एक प्रतिवेदनअनुसार गत शनिबार राति इरान अस्पताल अन्तरगतको जियाइआन अस्पतालका प्रमुख डा आनभारीमाथि सो आक्रमण भएको हो ।
उक्त आक्रमणका कारण उनको दुवै आँखामा क्षति पुगेको र उपचारार्थ तुरुन्तै अस्पताल लगिएको थियो । सुरक्षाको कारण देखाउँदै डा. आनभारीको पहिलो नाम उल्लेख नगरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
इस्फाहानको एक मुख्य सहरमा गत अक्टोबरमा कम्तीमा चारजना महिलामाथि एसिड फ्याँकी आक्रमण गरिएको थियो । तेरान र इस्फाहानमा भएको यी दुई आक्रमणबीच केही सम्बन्ध छ वा छैन सो भने खुलासा नभएको बताइएको छ ।